नेकपा (प्रचण्ड – माधब) को विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नेहरु कोको हुन्? – Palika Times
नेकपा (प्रचण्ड – माधब) को विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नेहरु कोको हुन्?
२८ माघ, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आज गर्न लागेको शक्ति प्रदर्शनका लागि जुलुस निस्कने ठाउँहरूमा नेता कार्यकर्ताहरू जम्मा हुन थालेका छन्। पुल्चोक, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, केशरमहल र जमल गरी उपत्यकाका ५ ठाउँबाट निस्कने जुलुसको लागि नेता कार्यकर्ता भेला हुँदै छन्।
सुन्धारा-वीरअस्पताल-जमल-घण्टाघर-बागबजार-पुतलीसडक-पद्मोदय मोड-प्रदर्शनी मार्ग हुँदै भृकुटीमण्डपस्थित सभा स्थलमा पुग्नेछ। नेकपाले विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने वक्ताहरूको टुंगो लगाएको छ। नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार आज बोल्ने वक्ताहरूमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रघुजी पन्त, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा रहेका छन्।
त्यसै गरी रामचन्द्र झा, सन्तकुमार चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, महफुज अन्सारी, भानुभक्त जोशी, अमृता थापा र अञ्जना विशंखेले पनि सो सभामा सम्बोधन गर्नेछन्। विरोध कार्यक्रमको दोस्रो चरणको विरोध सभा आज बुधवार काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा राखिएको छ। यसअघि माघ ९ मा राजधानीमा विरोध सभा गरिसकेको प्रचण्ड-माधव पक्षले आजको विरोध प्रदर्शन अहिलेसम्मकै ठूलो हुने दाबी गरेको छ।